Hindise-sharciyeedka soo-saarka abuur, oo ay Wasaaradda Beeraha u soo gudbisay dawladda dhammaadka Abriil, ayaa u baahan dib-u-eegis weyn. Labada agrareere iyo wasaarado laxiriira labaduba way hubanyihiin tan. Qaabkiisa hadda, ma xallin doono dhibaatada keenista abuurka ee uu dejiyay madaxweynuhu.
Waxaa jira dhowr cabashooyin waaweyn. Sharciga ayaa soo bandhigaya baahida loo qabo shati siinta iyo shahaadada soosaarka abuur. Si kastaba ha noqotee, jawaabta Wasaaradda Horumarinta Dhaqaalaha mashruuca waxay sheegaysaa in shuruudaha shahaadada ay ka hor imaaneyso sharciga ku saabsan sharciga farsamada. Liisankuna muhiim uma ahan warshadaha, maxaa yeelay hadafkeeda ugu weyni waa ka hortagida waxyeelada xuquuqda, nolosha ama caafimaadka muwaadiniinta, deegaanka. Iyo ujeedooyin kale, rukhsad qaadis lama oggola. Intaa waxaa sii dheer, dukumiintiga ayaa soo bandhigaya xayiraad ku saabsan soo dejinta abuurka shisheeyaha iyada oo aan la xakameynin beerashada iyo socodsiinta mas'uuliyiinta Ruushka. Waxay ka kooban tahay waajibaadyo xad-dhaaf ah, mamnuucid iyo xaddidid agribus, waxayna sidoo kale u horseedi kartaa kharash aan macquul ahayn ee beeralayda iyo miisaaniyadaha heerarka oo dhan, waxay ku soo gabagabeeyaan Wasaaradda Dhaqaalaha.
Horraantii bishii Juun, hoggaamiyeyaasha lixda ururrada wax-soo-saarka waxay u direen meel marinta mashruuca Wasaaradda Beeraha. Waxay ku raacsan yihiin Minek: shahaadada iyo shati siinta waxay u baahan doontaa kharashyo dheeri ah ganacsiga, taas oo aan kordhin doonin rabitaanka maalgashiga warshadaha. Laakiin talaabooyinkan oo kale wax uma dhimayaan tayada badeecada mana xallin doonaan arrinta been abuurka ah.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Beeraha, marka loo eego natiijooyinka 2019, saamiga miraha xulashada guryaha ee loo adeegsaday Ruushka waxay ahayd 62,7%. Inta badan beeraleyda Ruushku waxay ku tiirsan yihiin abuurka sokorta digaaga ee la soo dejiyo (miraha guryaha ayaa ka ah wadarta 0,6% wadarta).
Tags: horumarabuur abuurxayiraadaha agribusiness
Xarun taranka u gaar ah ayaa laga sameeyay Machadka Cilmi baarista Sayniska ee Ural
Waxa ay macaamiisha dambiil ee reer Russia karantiil ka koobneyd
Ololaha beerin ayaa lagu soo koobay gobolka Bryansk
“Wax walba oo dhaca waxay u fiicnaanayaan!” Wareysiga Agaasimaha FIC. Lorha Sergey Zhevora
Qalabka farsamada iyo cuntada - qayb cusub oo bandhig ah “Toddobaadka Siberian Agrarian Week”